सास गन्ध आएर हैरान हुनहुन्छ ? यसो गर्नुहोस् ! - MassiveKhabar
by news update October 8, 2020 Health
सास गन्ध आएर अरुका अगाडि राम्रोसँग कुराकानी गर्नसमेत अप्ठ्यारो स्थिति आउँदा लाजको अनुभव हुने नै भयो । साथै श्वासको गन्धले मानिसको स्वास्थ्य र खानपिनको अनुपयुक्त आनीबानीसमेत झल्काइरहेको हुन्छ । मुख र पेटका विभिन्न रोग र सरसफाइको कमीका कारण सास गन्हाउँछ । यस्तो बेला अपनाउनुहोस् केही सजिला उपाय ।
आफ्नो सरसरफाइको बानीको मूल्याङ्कन गर्ने दाँत माझ्नु र जिब्रो सफा गर्नु श्वास गनाउने समस्याबाट मुक्ति पाउने पहिलो शर्त हो । खानेकुरा खाइसकेपछि कुल्ला गर्नु मुखको सरसफाइको लागि महत्वपूर्ण छ । यति गर्दा पनि धेरै श्वास गन्हायो भने पोषणको अनियमितताका कारण त्यसो भएको हुन सक्छ ।
प्रशस्त पानी पिउने सासको गन्धका साझा कारण डिहाइड्रेसन अर्थात् पानीको कमी पनि हुन सक्छ । धेरै मानिस चाहिनेभन्दा थोरै पानी पिउँछन् । त्यही नै श्वासबाट गन्ध आउनुको मुख्य कारण हो । माइक्रो ब्याक्टेरियालाई निष्क्रिय पार्ने थुक या ¥याल उत्पादनका लागि प्रशस्त स्वच्छ र फ्लोराइड नभएको पानी पिउनु पर्छ ।
काँचा खानेकुरा खाने गाँजर, स्याउजस्ता फलफूल धेरै खानु सास गनाउने समस्याका लागि फाइदाजनक हुन्छ । रेशायुक्त काँचा फलफूल तथा तरकारी सासको गन्धसँग लड्न सहयोग गर्छ । यस्ता फलफूलले शरीरलाई चाहिने पोषण र शक्तिसमेत दिन्छ ।
नूनपानीले कुल्ला गर्ने नूनपानीले कुल्ला गर्दा घाँटी र मुखबाट गन्ध उत्पादन गर्ने ब्याक्टेरिया हट्छ । सफा पानीमा नून हालेर कुल्ला गर्नु सजिलो र सुलभ तरिका पनि हो ।
धूमपान नगर्ने धूमपानका कारण क्यान्सर हुनाका अलावा गिजालाई समेत क्षति पु¥याउँछ । धुमपान गर्नाले दाँत र गिजालाई फोहोर बनाउँछ । त्यसैले यसलाई त्याग्नुपर्छ ।
(श्रोत : पाथिभरा डेली )